Iindaba - Zingaphi iintlobo zeempahla ezingaqhelekanga ezikhoyo?
Impahla yolonwabo inokwahlulwa ngokubanzi ibe yi-avant-garde leis, ukuzonwabisa kwezemidlalo, ukuzonwabisa ngothando, indawo yeshishini kunye nokuzonwabisa emaphandleni.
1. Isinxibo segadi esifanelekileyo:
I-Avant-garde ukunxiba nje okuqhelekileyo, okwaziwa njengefashoni ukunxiba nje, lolona hlobo lwempahla eyenziwayo ethandwayo, ebonisa ngokupheleleyo isitayile yoyilo, uyilo loyilo kunye nezikhokelo zendlela. Ngexesha lefashoni yolonwabo, abayili befashoni kwizihloko eziphambili zefashoni zikhupha iimpahla ekuthiwa zeziphezulu kunye nezisemgangathweni iimpahla esele zilungisiwe ehlabathini kabini ngonyaka, uninzi lwazo zizimbo ze-avant-garde ezinxitywayo. Inqaku eliqhelekileyo le-avant-garde ukunxiba okungaqhelekanga kukuba kusetyenziswe inani elikhulu lamalaphu amatsha okanye amatsha, isitayile sahlukile, imilo i-avant-garde, kwaye umbala kunye nepatheni yahlukile. Ukuze sihlangabezane nokunambitheka kwabantu abatsha befashoni kwaye sikhokele imfashini yokusika, sizama konke okusemandleni ukubonisa ubungqangi besitayile sophawu kunye noyilo loyilo. Kwimarike, ukunxitywa kwesitayile sasedolophini ngamaqela ahlukeneyo okusetyenziswa kwefashoni kunye nokuqhelaniswa nobuhle kukwalolu hlobo lwempahla, kodwa ukuziqhelanisa nayo kubanzi kakhulu, kwaye isitayile asizukuhluka kakhulu.
Impahla yezemidlalo ayisiyompahla yezemidlalo yokhuphiswano olunxitywa ziimbaleki eziqeqeshiweyo, kodwa luhlobo lwezemidlalo olunemidlalo. Imidlalo yokunxiba eqhelekileyo yenzelwe ukuhlangabezana nemisebenzi ethile yezemidlalo, enokubonisa imvakalelo kunye nesitayile esinamandla semidlalo kwezolonwabo. Ubume beempahla zemidlalo zihlala zisondele kwindlela yezemidlalo, ngoxinano olulinganiselweyo, umbala oqaqambileyo, olula ukolula kunye nokusebenza kakuhle. Ubume bayo, ukusebenza kwayo kunye nokutshintsha kwayo bekusoloko kuthandwa luluntu, ngakumbi ulutsha. Ngokusekwe kwingcinga ethandwayo yobugcisa, iimpahla zemidlalo zigxile kumgangatho wezinto ezingaphezulu, ukusika itekhnoloji kunye nempumelelo okanye ukusilela kwendlela yokusebenza yohlobo lokumisela ixabiso lemarike yeemveliso.
Ukunxiba kwezithandani luhlobo lwempahla yokunxiba kunye nothando. Oko kubizwa ngokuba kukunxiba kwamantombazana, ukunxiba kwamanenekazi kunye nokunye ukunxiba iimpahla zasekhaya ziindidi eziqhelekileyo kwimarike. Iimpawu eziqhelekileyo zokunxiba ngokungaqhelekanga yimigca ethambileyo kwaye egudileyo, imibala etyebileyo, ebanzi kunye nomfanekiso omkhulu womzekelo, isitayile esithambileyo nesithambileyo sekhrim, ithenda kunye neepateni zekhathuni ezithandekayo, kunye nenani elikhulu lezinto zokuhombisa ezinje ngentsontelo, isaphetha, i-wave durian, Izinto zokuhombisa kunye nezinye izinto zokuhombisa zisetyenziswa ngokubanzi ukwenza imeko yothando kunye neendlela zokuzonwabisa.
4.Ishishini ukunxiba nje:
Ukunxiba ngokungaqhelekanga kushishino, okwaziwa nangokuba kukunxiba nje okuqhelekileyo, yinto ebonakala ngathi iyaphikisana, kodwa ukusuka kwimeko yangoku yempahla yanamhlanje yabantu, nokuba kukwiimeko zorhwebo ezisesikweni, ukudityaniswa kwesitayile sokuzonwabisa akunakuphepheka. Ke ngoko, ukunxiba ngokungaqhelekanga kushishino kunokubonwa njengokwahluka kwesinxibo seshishini, okuyindibaniselwano yendalo yemodeli yokunxiba esesikweni kunye nezinto zokuzonwabisa ezithandwayo. Uyilo lolu hlobo lwempahla ngokusisiseko lugcina ulwandlalo lwesitayile kunye nesimbo esisiseko selokhwe esesikweni. Ijolise kwiinkcukacha zolwakhiwo, izinto zecandelo, umbala, ilaphu, kunye neendlela zetekhnoloji zokwenza uhlengahlengiso oluthile, ukuze kudityaniswe ngokufanelekileyo izinto ezithandwayo zesitayile sokuzonwabisa kwisinxibo seshishini, ukuze kufikelelwe ngokungqongqo kodwa kungabi ngqwabalala, ukusebenza okungahambelaniyo, ukuze kuphuculwe ukudibana emsebenzini.
5. Ilizwe ukunxiba nje:
Uhlobo lwelizwe lokunxiba ngokungaqhelekanga lolona hlobo lude lokuzonwabisa kwimbali. Ngapha koko, iimpahla ezazinxitywe ngamanenekazi elizwe ngenkulungwane ye-19 yayingumzekelo wokunxiba kwezolonwabo, ngakumbi kwicandelo lokunxiba kwamadoda. Izinto ezilula, imodeli eqhelekileyo kunye ekhululekile kunye nesimbo sasimahla se-ore erhabaxa ziye zaba ziimvakalelo zokwenyani zabantu ababuyela kwindalo kunye nokuxhasa indalo. Ukunxiba iimpahla zasemaphandleni luhlobo lwempahla yokonwaba enxitywa ngabantu basezidolophini banamhlanje ngeemvakalelo zasemaphandleni, ezibonisa ubume babantu banamhlanje. Iqhutywa ngummandla, amaxesha kunye neemvakalelo zobuhle bobuqu, iimpahla zokuzonwabisa zasemaphandleni zibhalwe ngeendlela ezahlukeneyo kwimarike, ezinje "ngesinxibo sesitayile sesizwe", "isinxibo sabantu bokuzonwabisa", "ukhenketho kunye nokunxiba iiholide zangaphandle".